ठूलो छलाङ मारिरहेका 'सानो भाइ' नाजिर - Glamorous Icon
३१ भाद्र २०७३, शुक्रबार १५:१३
Home›GIcon News›ठूलो छलाङ मारिरहेका ‘सानो भाइ’ नाजिर
११ पढ्दै गरेका सानो भाइ।
२ दिदी १ दाइ र बाबु आमाका प्यारो कान्छो भाइलाई लिएर उनीहरूका आ-आफ्नै सपना थिए।
जेठी दिदी आइएनजिओमा थिइन्।
‘सानो भाइ! आएनजिओमा सँगै काम गर्नुपर्छ। तँ सोसियोलोजी पढ’ उनी भन्थिन्।
कान्छी दिदी प्रहरीमा, उनको सपना भाइलाई आफू जस्तै बनाउने।
‘हेर सरकारी जागिर नै खानुपर्छ।तँ पुलिस बन्नुपर्छ।। किताब पठाइदिन्छु, त्यही पढ्नु। फिजिकलमा पनि भिड्नुपर्छ। अण्डा र चना खाने पैसा म पठाइ दिन्छु।’
आमा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्थिन, त्यसैले उनको चाहाना छोरो मेडिकलमा लागोस् भन्ने। सके डाक्टर नै होस्, नभए अहेवसम्म बनोस्।
रंगमञ्चमा र नेपाली फिल्ममा विस्तारै आफ्नो नाम स्थापित गर्ने क्रममा रहेका नाजिर हुसौनले परिवारले आफूलाई लिएर बुनेका योजनाहरूको भूत सम्झिए।
‘म सानो भएकाले सबैको प्यारो। त्यही भएर उहाँहरूका मलाई लिएर आ-आफ्नै सपना थिए। तर, म यहाँ आइपुगे’, नाजिरले भने।
नाजिरलाई कलाकरितामा कुनै हुरीले बत्ताएर ल्याएको जस्तो लाग्छ।
सानोदेखी नै नाच्नमा रूचि राख्ने उनलाई एउटा नाचको वर्कसपले आजको ठाँउसम्म ल्याइदिएको हो।
उनकी कान्छी दिदी काठमाडौंमा नै थिइन्। प्रहरी सेवामा रहेकी उनको एम्बेसीमा धेरै काम पर्थ्यो। त्यही बेला नेदरल्यान्डबाट एउटा टोली ब्याले सिकाउन काठमाडौं आएको थियो। उनैले ११ पढ्दै गरेका नाजिरलाई काठमाडौं वर्कसपका लागि बोलाइन्।
११ को जाँच सक्किएको समय थियो। फ्रि थिए, काठमाडौं आए।
५ हप्ताको वर्कसप लिए। उनीहरूले त्यसमा परफर्मिङ् आर्ट पनि सिएका। त्यसमा नाच कम फिजिकल एक्सन धेरै गराउँथे। सो सिकाउने उनकी म्यामले थिएटरको बाटो सुझाइन्।
‘म्यामले तिम्रो एक्सप्रेसन राम्रो छ। यता थिएटर छ भने, किन जोइन गर्दैनौ?’
सुरूमा उनी ट्वाँ परे। मिडियाबाटमात्र नाटकको बारेमा सुनेका।
नाजिरलाई म्यामको कुरा मनपर्‍यो। उनले मण्डलाका राजन खतिवडालाई फोन घुमाए।
‘दाइ म थिएटर गर्छु।’
राजनले नाजिर ६ कक्षा पढ्दै गर्दा उनीहरूको स्कूलमा गएर नाटक सिकाएका थिए। राजन पनि बाराका र नाजिर पनि। त्यो पनि एउटै गाँउका।
ब्याचलर पहिलो वर्षको जाँच दिएपछि उनी काठमाडौ छिरे। राजनकोमा आए।
राजनले दयाहाङ् र श्रृजना सुब्बालाई चिनाइदिए।
दया र श्रृजनासँग चिनापर्ची सकिएपछि राजनले नाजिरको हातमा एउटा स्क्रिप्ट थमाइदिए र भने, ‘यो पढ।’
नाजिरलाई लाग्यो, ‘वाह नाटकको रिहर्सलमा नै बोलाए त।’
राजनले थमाइदिएको स्क्रिप्ट अभि सुवेदीको ‘चिरिएका साँझहरू’को थियो। किताब विमोचन हुँदै थियो। किताबमा सोही शीर्षकमा रहेको नाटकलाई देकाउँदै किताब विमोचन गरिने भएकाले राजनले एउटा कोरसका निम्ति उनलाई छानेका थिए।
हेर्दा सोझो धेरै सवालजवाफ नगर्ने लाग्ने नाजिर त्यसको ठ्याक्कै उल्टा छन्। उनले सोधे, ‘को को हुनुहुन्छ?’
नाम सुनेपछि उनी दंग। मिडियामा देखेका र नाम पढेकाहरू।
उनी फेरी बिगतमै फर्किए।
‘म उछिट्एरै आँए।’
नाटक र फिल्ममा किन आए? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर उनीसँग केही समय थिएनन्। आज सम्झदाचाँहि लाग्छ उनी कला क्षेत्रमा ढल्कनुमा घरको वातावरणले काम गरेको रहेछ।
‘मेरी आमा राम्रो माद्ल बजाउनुहुन्छ। गाँउमा जो कसैको बिहे हुन लागेको होस्, घरमा बिहेको सुपारी आइपुग्थ्यो। म नाच्न मनपराउँने हुनाले आमाको पछि लाग्थे। दाइ चित्र बनाउनु हुन्थ्यो। मलाई त्यो पनि मनपर्थ्यो। बुबालाई गजल लेख्नुहुन्थ्यो। गजलका क्यासेट घरभरी थिए। सायद यिनै कुराले प्रभाव पारेको हो मलाई। यीनै कुराले मलाई यता ढल्कायो।’
हुन पनि बाराको स्याउली बजारमा जन्मे हुर्केका नाजिरको ठाँउमा नाच्ने, नाटक जस्ता कुरा राम रमाइलो बाहेक केही थिएन। त्यो ठाँउको सम्झना गर्दा नियतीले नै ल्यायो उनलाई।
‘चिरिएका साँझ’ बाट उनको नेपाली रंगमञ्चको यात्रा सुरू भयो। उनी मण्डला थिएटरमा जोडिए। मण्डला थिएटरको पहिलो व्याचका विद्यार्थी हुन्, नाजिर। आजको नाटकघर निर्माणमा उनले पनि अरी सदस्य सरह पसिना बहाएका छन्। मण्डलाको प्रगतीसँगै उनी पनि अगाडी बढे।
मण्डलामा आबद्ध भए यता नाजिरले सानो ठूलो गरेर १८ वटा नाटकहरूमा अभिनय गरेका छन्। जसमध्ये चरनदास चोर, जम्पिङ फ्रग, स्वप्नमहल, डिग्री माइला, माथा पञ्चर, वैतरणी क्याफे तथा ब्ल्याक स्वान प्रमुख हुन्।
नाटकमा उछिट्टिएर आएका उनी फिल्ममा पनि बिना योजना उछिट्टिएरै आइपुगे।
मण्डलामा आबद्ध आफ्ना सहकर्मीहरू बिजय बराल, बुद्धि तामाङ् ‘हैट’ तथा आफ्नै गुरू दयाहाङ् फिल्म पर्दामा छाउन लाग्दा उनमा फिल्मप्रति कुनै मोह जागेको थिएन्। उनीहरू पर्दामा चम्किरहँदा उनलाई ‘म पनि फिल्म गर्छु’ भन्ने रहर आएन्। बस उनको ध्यान नाटकमै थियो। उनी अझ केही समय यतै व्यतित गर्न चाहन्थे।
‘मेरो यस्तो चाहानाले गर्दा मैले मलाई प्रस्ताव गरिएका २ फिल्मलाई नाईं भने। ममा त्यो जाँगर र इच्छा बएको भए, म पनि फिल्मको लागि चाहिने तयारीमा लाग्थे होला तर किन हो मेरो मन भएन। म सिक्दै थिएँ, त्यसैले पाएको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्।’
सायद त्यो बेला नाजिरको फिल्ममा आउने समय आइसकेको थिएन्। अन्तत: त्यसको समय पनि आइपुग्यो।
नेपाली फिल्मका लागि पछिल्लो समय नाट्यक्षेत्र कलाकारको श्रोतकेन्द्र बनिरहेको छ। फिल्मले थुप्रै कलाकारलाई नाटकबाट तानेर ल्याइसकेको छ।
कलाकार चाहियो कि आजकल केही निर्देशकहरू नाटकघर छिर्छन् र आफूलाई चाहिने कलाकारको खोजी गर्छन्। नाजिरमा पनि एकजनाले आफ्नो ‘राइट च्वाइस’ हुने देखें।
‘डिग्री माइला’को मञ्चन भइरहेको थियो। सुभाष कोइरालाको निर्देशनमा बन्न लागेको ‘पुन्टे परेड’का लागि कलाकारको खोजी भइरहेको रहेछ। कोइरालाका निकट मित्र निर्देशक एम एस अग्रजको नजरमा नाजिर परे।
‘एम एस दाइलाई मेरो काम मनपरेछ। उता कलाकारको खोजी भइरहेको रहेछ। एक दिन म खाना खाइरहेको थिएँ, मलाई ‘पुन्टे परेड’को प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले हुन्छ नि त, स्टोरी सुनौ न भने। मैले दाइहरूलाई सोधे। उहाँहरूले यही हो मौका गर्दा हुन्छ भनेपछि मैले ओके भने।’
‘पुन्टे परेड’मा नाजिर ‘हेल्मेट गाइ’को भूमिकामा थिए। फिल्मले वक्सअफिसमा खास कमाल देखाएन। उनको कामको तारिफ भयो। यसैबिच उनलाई ‘जंगे’मा ‘भप्पु’को प्रस्ताव आयो। ‘जंगे’को पोस्टमा नै उनको काम देखेपछि ‘होस्टल रिटन्स’मा मौका पाए।
‘जंगेको पोस्टको काम हुँदा मेरो काम मनपरेपछि मलाई ‘होस्टल रिटन्स’मा काम गर्ने अफर आयो। यसका लागि निर्देशक सुरज भूषालको नजरमा पनि म ने परेको रहेछु। निर्माता र निर्देशकको रोजाइ एउटै भएपछि मैले फिल्म पाएँ।’
‘होस्टल रिटन्स्’ उनका लागि विशेष बन्न पुग्यो। फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको ‘रामेश्वर यादव’को भूमिकाले उनलाई दर्शकहरू माझ परिचित गराउने काम गर्यो। फिल्मको ‘रामेश्वर’ पात्रबाट उनी यति चर्चित छन् कि धेरै दर्शकलाई उनको असली नाम नै थाहा छैन्।
‘केही साता अगाडी ‘विर विक्रम’ रिलिज भयो। सुरुको क्रेडिट लाइनमा अरूको नाम आउँदा हुटिङ् सुने तर मेरो नाम आउँदा सब चुप। म दर्शकहरूसँगै बसेर फिल्म हेरिरहेको थिए। जब मेरो इन्ट्री भयो। छवैका दर्शकहरूले ‘वाह रामेश्वर आयो’ भन्नुभयो।’
यसलाई उनले आफ्नो सफलता मानेका छन्। धेरैले उनी जनकपूरकै रामेश्वर हुन भन्ने ठान्छन्। फिल्मको सो चरित्रमा भिज्न गरेको मेहेनत र अभिनयले गर्दा हात पारेको सफलता लाग्छ उनलाई।
उनी हुर्किएको गाँउमा थोरै मुश्लिम घर छन् भने बाँकी घरहरू बाहुन, क्षेत्री तथा केही तामाङ् समुदायले भरिएको छ। उनकी आमा क्षेत्री परिवारबाट हुन् जसका कारणले गर्दा उनको घरमा ठेट नेपाली बोलिन्छ भने मूल घरमा भोजपुरी। मैथिली त राम्रोसँग सुनेका पनि थिएनन्। पण्डित भएपछि टुप्पी पाले, जनै लगाए।
फिल्ममा उनले गरेको यो कामका लागि तारिफ मात्र होइन् आलोचनाका स्वरहरू पनि उनले सुने।
आलोचना उनको धर्मका कारण थियो।
उनले सुने, ‘मुस्लिम भएर यस्तो नगरेको भए हुने, किन गरेको होला?’
यस्ता आलोचनाले उनलाई खास असर गरेको छैन् बरू नाजिरसँग उनीहरूलाई दिने सटिक जवाफ छ।
‘बलिउडमा पनि सलमान, शाहरूख, आमिरले पनि यस्तो गरिरहेकै छन्। उनीहरूलाई वाह भन्छन्। मेरो आलोचना भयो। म एउटा कलाकारको धर्म निर्वाह गरिरहेको छु भन्नेचाँहि सोचेनन्। यस्तो भइरहन्छ काम गर्दा।’
यी चिजलाई नाजिरले मनमा गडाएका छैनन्। उनले यसलाई माया गर्नेहरूको मायाले मिल्काइदिएका छन्। ‘राम्रै चिज साथ राख्दा र सोच्दा फाइदा हुन्छ’, भन्दै उनले एउटा प्रसँग सुनाए।
‘म केही समय अगाडी घर जान सिमरा एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कदै थिए। एकजना अंकलले बाबु नमस्कार भन्नुभयो। म झसगं भएँ। मेरो आङै सिरिङ् भयो ठूलो मान्छेले नमस्कार गरेको देखेर। त्यो अकंल मेरो बुबाको साथी हुनुहुँदो रहेछ। मलाई यसले म राम्रै गरिरहेको रहेछु भन्ने लाग्यो।’
गाँउ पुग्दा पनि स्कूल पढ्ने भाइबहिनीहरूले ‘सानो भाइ दाइ’ भन्दै घेरे। घरतीर उनलाई सबैले नामले भन्दा पनि ‘सानो भाइ’ भनेर चिन्छन्। घरमा पनि उनको कामबाट बाबुआमा दिदीदाइहरू खुशी नै छन् तर उनकी हजुरआमालाई चाँहि उत्ति मनपरेको छैन् नातीको ‘नौटंकी लाइन’।
नाजिरका काकासँग बिरगन्ज बस्ने ‘दादी’ भोजपुरी लबजमा नेपालीमा लेग्रो तान्दै, ‘अब त रहर पुग्यो होला। आइज व्यापार गर्नुपर्छ। छोड दे! त्यो नौटंकी लाइन’, भन्छिन्।
नाजिरले दादीले नाजिरले गर्दै आएको थिएटर तराईतीर बिबाह आदि समारोहमा गरिने ओर्केष्ट्रा जस्तै लाग्ने रहेछ। त्यसैले उनको इच्छा नातिले केही ढंगको काम गरोस् भन्ने रहेछ।
नाजिरकी दादीलाई उनका दाजुले फिल्म यूट्यूबबाट देखाइदिए। फिल्म हेर्दा दादी रोइन्। दिदीहरूले नि रूँदै फोन गरे।
त्यसपछि दादीको दृष्टिकोण पेरिएको छ। घरका सबैको साथ र सहयोग छ।
मुस्लिम समुदायबाट आएकाले धेरैले यसले के गरिराछ भन्ने छ। काठमाडौंमा बस्ने समुदाय पनि यसबाट अछुतो नरहेको अनुभव नाजिरले गरेका छन्। उनको समुदायमा अभिनय गर्ने भनेपछि नाक खुम्चाउने धेरै छन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा मधेशीमूलका कलाकारलाई ‘स्टेरियोटाइप’ ढंगले प्रस्तुत गरिने गरेको भनेर आलोचना सुरू भएको छ।
नाजिर यसलाई विवादभन्दा पनि ‘मन्थन सुरू भएको’ ठान्छन्।
‘सबै चिज एकैपटक परिवर्तन हुँदैन्। विस्तारै हुन्छ, जून भइ पनि रहेको छ। यसका लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि अभिनय गर्ने कलाकारले आफू कुन हदमा जाने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’
विस्तारै नेपाली फिल्मका विशेषताहरू परिवर्तन हुँदै गएको सन्दर्भमा फिल्महरू त्यही अनुसार लेखिन थालेका छन्। नाजिर पनि आफूलाई त्यसरी लेखिने पात्रहरूमा प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। तर, उनलाई एउटा कुराको डर छ।
‘मलाई नै हेरेर कथा लेखिन थाल्यो भने म एउटा टाइपकास्ट बन्छु की लाग्छ। किनकी म एउटा भूमिकामा रूचाइए भनेर फिल्म लेख्नेले यसैको छेउछाउ रहेर कथा लेख्दिनु होला। एउटाले गरेपछि पनि त्यस्तै गरिदिनु होला। त्यो भन्दा मेरो भित्रको कलाकारितालाई नै चुनौती दिने भूमिका आयो भने म खुशी हुन्छ। त्यसैले मलाई भन्दा पनि पात्र सोचेर मेरा लागि कथा लेखियोस भन्ने लाग्छ। त्यस्ता चरित्रका लागि जस्तो मेहेनत गर्नुपरे पनि गर्छु चाहे २-३ वर्ष ने किन नलागोस्?’
नाजिरको यो भनाइमा दम पनि छ र उनले त्यो ‘विर विक्रम’बाट प्रमाणित पनि गरेका छन्। फिल्ममा उनले पहाडे दलितको भूमिका गरेका छन्।
नाजिरको पछिल्लो रिलिजका रूपमा ‘गाँठो’ शुक्रबारबाट रिलिज भएको छ। फिल्ममा उनको काम मनपराइनेछ भन्ने आशा छ। फिल्ममा उनले निर्बाह गरेको ‘बाइपोलार डिसअडर’ पात्रलाई सक्दो मेहेनत गरेको बताउँछन्। फिल्मको व्यापारिक नतिजा जेजस्तो आएपनि अभिनयको नतिजा गतिलो आओस् भन्ने उनको चाहना छ।
हाल फिल्ममा विस्तारै ‘वान्टेड’ हुँदै गएका नाजिरले थिएटर मिस गरिरहेका छन् रे। उनी त्यो मिसलाई छिट्टै हटाउन चाहन्छन्।
‘फिल्ममा लागेपछि नाटक मिस भइरहेछ। यो वर्षको अन्त्यसम्म दर्शकले मलाई मन्चमा फेरि देख्नुहुनेछ।’
पल र पूजाले रोमान्स गर्ने भए चलचित्र ...